Ajụjụ - Gemic
Kwesịrị Iweghachi Ihe Dị Oké Ọnụ Ahịa? gem.agency na-eme ka ọ dị mfe.
Anyị na-agbasi mbọ ike maka afọ ojuju ndị ahịa karịa ihe niile. Ọ bụrụ na n’ime ụbọchị iri atọ ị natara nnukwu nkume (s) gị afọ ojuju na iwu gị, ị nwere ike weghachitere anyị ya na ọnọdụ mbụ na enweghị emebi. Enwere ike ịghaghachi bara nnukwu uru n'oge nlele ụbọchị 30 a.
Biko Email GEMIC maka a Return Authorization Number (Gbaa) Na agbakwunyere Return Ntuziaka.
NB: Iwu laghachi na anyị na-enweghị a ọsọ a ga-jụrụ ma laghachi n'ime sender. Nloghachi nkwakọ ngwaahịa na mbupu ụgwọ bụ ibu ọrụ nke ziri ozi. All ahịa na-ikpeazụ mgbe 30 ụbọchị (lọta ihe a ga-postmarked n'ime 30 ụbọchị nke ụbọchị nke iji na-natara).
Biko adịghị ajụ izipụ akwụkwọ ozi, kwesịrị na ị chọrọ iji kagbuo iwu mgbe ọ na-e Ẹnam ekese, ma tupu e nyefewo ha n'aka. Ọ bụrụ na iji na-ekweghị, ndị ahịa ga iburu ihe zuru ezu, ihe ma ọ bụrụ na furu efu na ihe nile brokerage ebubo na ọrụ niile metere n'elu ya laghachi.
N'ọtụtụ mba, kwuru, butekwara nwere ike ịdabere na ọdabara omenala ụgwọ na ụtụ isi. Azụ ahịa na-ahụ maka omenala ọ bụla, tax na ọrụ ji. Alaghachi mere n'ihi hotara na mbụ-apụghị ikike.
** Ha niile refunds na-mere site na otu usoro dị ka ụgwọ natara. Mbupu, mkpuchi na kaadị akwụmụgwọ nhazi-akwụ ụgwọ ndị na-abụghị refundable. Ọ dịghị restocking ego. Ọ dịghị edochi awa.
More Ajụjụ? Kpọtụrụ anyị
Nche & Nzuzo
GEMIC na-echegbu onwe ya gbasara nchekwa na nchekwa ndị ahịa anyị. Anyị na-ahụ na usoro azụmahịa anyị dị oke mma yana ozi ndị ahịa anyị echedoro.
All ugwo na kaadị ozi a na-eme na a ala peeji site PayPal. Anyị enweghị ohere gị kaadị ma ọ bụ ego ozi. PayPal nche ozi
GEMIC Laboratory na-asọpụrụ ozi nkeonwe na weebụsaịtị ya. Enwere ike iji adreesị email gị nwa oge ịnye email ma ọ bụ iwu.
Anyị ga-ere gị email address, nchọgharị nakawa etu esi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ozi.
GEMIC na-eji kuki ihe nchọgharị iji mee ka ọbịbịa gị ka mma ma nyere anyị aka ịzụ ahịa ịntanetị. Enweghị ozi onwe gị na-echekwa na kuki. A ga-enwerịrị kuki iji nweta njirimara niile nke saịtị anyị.
N'ihi na ihe ajụjụ biko kpọtụrụ anyị.
I nwere ike ịtụ a akwụkwọ mgbe ị na tinye otu ihe na gị cart. Iji mee nke a, Pịa njikọ "Tinye mkpuru akwukwo maka ihe a" na ihe nkowa page n'elu "tinye na ụgbọ ibu" button. Nke a ga-emeghe akwụkwọ nhọrọ.
All ihe na-ekwe nkwa na GEMIC. Anyị na-ahụ na ị na-enweta ihe ị na-akwụ.
All bara nnukwu uru na GEMIC na-ekwe nkwa na-dị ka kwuru. Ndị ọrụ ọkachamara anyị ji nlezianya nyochaa ma tulee ihe ọ bụla.
Nkume ọ bụla dị na GEMIC bụ mkpuru okike nke ụwa. Anyị anaghị emeso sịntetik ma ọ bụ laabu-kere "bara nnukwu uru".
Ihe Ị Lee, ihe ị na-
Onye ọ bụla mkpuru foto bụ nke ahụ n'ezie mkpuru ị ga-enweta. Anyị anaghị eji ngwaahịa foto ma ọ bụ yiri photos maka dị iche iche nkume.
All isi n'elu na-kụziri site na anyị 100% ego na-azụ nkwa. Anyị na-eguzo anyị bara nnukwu uru, dị ka ndị ahịa anyị anọnyere anyị.
Ịkwụ Ụgwọ Nhọrọ na Atumatu
Atule-esi dị mma, ala na mfe na GEMIC Laboratory.
Anyị na-enye ndị na-esonụ mgbanwe ịkwụ ụgwọ ụzọ maka emecha gị ka:
Kaadị akwụmụgwọ kwụọ ụgwọ via PayPal (ọ dịghị PayPal na akaụntụ chọrọ)
PayPal-anabata Visa, Visa Delta, Visa Electron, MasterCard, EuroCard, Maestro na American Express. PayPal nche ozi.
Ịkwụ ụgwọ gị PayPal na akaụntụ
Anyị anọwo a kwetakwara na ego PayPal so.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-adịghị na otu akaụntụ, ị nwere ike mfe imeghe a akaụntụ ọhụrụ site na-eso ndị nọ na ihuenyo ntụziaka.
Ịkwụ ụgwọ site Western Union nyefe
Mgbe akwụ ụgwọ site Western Union nyefe, gị ihe ga-edebere ruo ụbọchị atọ. Biko Email anyị pụrụ iche ego azụmahịa nọmba (MTN #) maka gị nyefe. Ozugbo ego a natara, anyị ga-hazie gị ka.
Cheta na: Nyefee ụgwọ gaghị deducted si natara ego.
Ịkwụ ụgwọ site kpọmkwem akụ nyefe
Mgbe akwụ ụgwọ site kpọmkwem akụ nyefe, gị ihe ga-edebere ruo ụbọchị atọ. Biko Email anyị na akụ nyefe akwụkwọ koodu ozugbo ị malite payment. Ozugbo ego a natara, anyị ga-hazie gị ka.
Ozugbo ị dị njikere ịlele:
Nyochaa ụgbọ ibu azụmahịa gị wee họrọ usoro mbupu gị. Anyị na-enye ụzọ abụọ a na-akwụ ụgwọ na ọnụego; FedEx (-3bọchị 4-XNUMX)
Standard Worldwide International Airmail (ụbọchị 10-21)
Pịa “nọgide na ndenye ọpụpụ” na-abanye na gị mbupu adreesị.
Họrọ usoro ịkwụ ụgwọ gị wee pịa “kwụọ ụgwọ ugbu a”.
Tinye ozi ịgba ụgwọ gị, ma ọ bụ bipụta ntuziaka ihuenyo maka nnyefe ego.
Ozugbo etinyere iwu gị, ị ga-enweta nkwenye email n'aka anyị na adreesị email gị.
Cheta na: Biko dị njikere itinye adreesị ozi-e gị iji hụ na ị nwere ike ịnweta mbupu anyị ma nye anyị ozi ịntanetị nkwenye. Ọ bụrụ n’ịnabataghị ozi email ọ bụla n’aka anyị, biko kpachara anya ịlele folda email gị ma ọ bụ ozi junk gị.
A ga-akwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ na ịkwụ ụgwọ PayPal na ego ọ bụla. Kwụ ụgwọ site na Western Union ma ọ bụ site na nnyefe ụlọ akụ ga-ezigara na dollar US.
Mgbe ị na-ahọrọ ego na-abụghị dollar US, a ga-eji ọnụego mgbanwe maka ụbọchị dị ugbu a iji gbanwee ọnụego egosiri.
PayPal na ụlọ akụ gị na-arụ ọrụ (kaadị akwụmụgwọ kredit) ga-eji ọnụego mgbanwe nke aka ha iji tọghata ego ndị ahụ, ya mere, ebubo na ego ị họọrọ ga-adịtụ iche na ọnụahịa egosiri na ego ahụ na weebụsaịtị anyị.
GEMIC ga-akwụ ụgwọ ego egosiri naanị. Ego ọ bụla agbakwunyere na-adabere na PayPal, kaadị kredit gị nke na-ewepụta usoro akụ ma ọ bụ Western Union.
Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ chọọ ịtụle nhọrọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ, biko nweere onwe gị kpọtụrụ anyị.
Shipgbọ njem ebugharị na-ewe ụbọchị 3-4 maka nnyefe ma enwere ike nyochaa ya na ntanetị ọ bụla. A na-ejikwa ngwugwu zuru ezu. A mbinye aka a chọrọ n'elu nnyefe. Anaputara ya bụ Monday rue Fraịde maka ọtụtụ mba. Enweghị igbe PO (ma e wezụga UAE, Saudi Arabia na Kuwait), adreesị APO ma ọ bụ FPO nwere ike iji.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị nwere 'mbinye aka na faịlụ', biko kpọọ EMS iji kagbuo ikike a. Nchịkọta ndị enyerefe na-enweghị mbinye aka, n'ihi 'mbinye aka na faịlụ' enweghị ike ikpuchi onye ọrụ mkpuchi anyị.
All bara nnukwu uru gosiri dị ka 'dị' na-na ngwaahịa na njikere maka ozugbo Mbupu. A na-ahazi iwu n'ime 1 ụbọchị ọrụ Mọnde - Fraịde (ewepu ezumike)
N'ọtụtụ mba, mbubata mbubata na ụtụ isi kwụrụ ụgwọ maka mbupụ ụgbọ mmiri. Akwụkwọ edebanye aha na-ewe oge, mana ọ na-ezere ụgwọ ndị ọzọ. Anyị nwere obi ụtọ ịkwọ ụgbọ mmiri dị ka Onyinye, mana biko mara na anyị enweghị ikike maka ụgwọ ndị ọzọ enwere ike ime na obodo gị.
Nchịkọta niile sitere na GEMIC gụnyere akwụkwọ ọnụahịa zuru ezu. Biko kpọtụrụ anyị tupu ịtụkwasị gị iji bụrụ na ị chọrọ a ahaziri akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ ọ dịghị akwụkwọ ọnụahịa mgbe nile.
Acha Ahịa ihe doo anya n'ọtụtụ na
GEMIC na-eji usoro idobe anya dị n'okpuru ebe a
IF : Loupe dị ọcha - n'ime na-enweghị ntụpọ; enweghị inclusions.
VVS : Fọrọ nke nta ka loupe dị ọcha - dị nnọọ obere inclusions; inclusions sonso hụrụ n'okpuru 10x magnification.
VS : Anya dị ọcha - obere ihe ntinye; Enwere ike ịhụ ntakịrị ihe site na anya a zụrụ azụ ma ọ bụ n'okpuru nkwalite 10x.
SI : Obere ihe tinyere - enwere ike iji anya nke uche hu ihe ndi ozo.
I : Gụnyere - a na-ahụ ya anya na anya gba ọtọ.